कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सिटौला नै 'रिङ' बाहिर ! - कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सिटौला नै 'रिङ' बाहिर !
२०७५, २४ चैत्र, 08:30:58 AM
कांग्रेसभित्र आकांक्षी धेरै, देउवा र पौडेल न मिल्छन् न मिलाउन नै सक्छन् !
काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यको नाम दुवै पक्षबाट टुंगो लगाउने गृहकार्य बाँकी रहेकाले सहमतिमै बैठक स्थगित भएको बताए । अर्को कारण थियो पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कुन पक्षले समेट्ने ?
सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको एजेन्डा राखेर बैठक बोलाएका थिए । यो समिति केन्द्रीय कार्यसमितिपछिको शक्तिशाली संरचना हो । कुनै निर्णय या दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेला केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसक्दा कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइन्छ ।
सिटौलालाई देउवाले पाउने १२ सदस्यमध्येबाट समेटिनेछ । सभापति देउवाविरुद्ध एउटै मोर्चामा उभिएका पौडेल–सिटौलाबीचको सम्बन्ध योघटनाबाट चिसिने देखिएको छ । ‘बल्लबल्ल एउटै टिममा ल्याउने वातावरण बनेको थियो, हिजो ९शुक्रबार० को घटनाले फेरि सम्बन्ध चिसिएको छ,’ सिटौला निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसबाट सभापति देउवालाई लाभ पुगेको छ ।’
उपसभापति निधिले भने प्रजातन्क्रमा शत्ति सन्तुलन र बाँडफाँटलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । यसअघिको समिति भागबन्डा मिलाउनकै लागि २९ सदस्यीयलाई बढाएर ३२ सदस्यीय बनाइएको थियो, जुन विधानविपरीत गठन भएको भनी पौडेल पक्षले आवाज उठाएपछि सभापति देउवाले गत वैशाख १६ गते विघटन गरेका थिए । पौडेलले यसअघिकै मापदण्डअनुसार समिति बन्नुपर्ने माग गरेको खबरलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको वरिष्ठता क्रममा ३२ नम्बरमा रहेका शेखर कोइराला छुट्छन् । तर, कुलबहादुर गुरुङ, नरहरि आचार्य र नारायण खड्का त्यस्तो मापदण्डका कारण सदस्यमा आउँछन् । यी तीनमध्ये आचार्य पछिल्लो समय स्वास्थ्यका कारण क्रियाशील छैनन् ।गुरुङ देउवा पक्षबाट र खड्का पौडेल पक्षबाट अलग भएका छन् ।
यी दुवैलाई समेट्ने कि नसमेट्ने भन्नेमा देउवा पक्षमा अलमल छ । देउवालाई आफ्नो टिमबाट सिटौलाका अतिरिक्त गोपालमान श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, फरमुल्लामन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, एनपी सावद, आनन्द ढुंगाना (पौडेल पक्ष छाडेर देउवातिर गएका), भीष्मराज आङदम्बे, जीवनबहादुर शाही, सुरेन्द्र पाण्डे, पुष्पा भुसाल, अजयकुमार चौरासियामध्येबाट ल्याउन दबाब छ ।आकांक्षीको संख्या दुवै पक्षमा बढी छ ।
मूल नेतृत्व नै विभिन्न गुटउपगुटमा समाहित हुने खतरा देखियो : कोइराला